The Rohingya News Bank : USAID
Showing posts with label USAID. Show all posts
The fund will be used to rehabilitate cyclone shelters and reduce the risk of disasters in Cox’s Bazar
The United States Agency for International Development (USAID) and Saudi Arabia's King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief) will provide $1 million each toaprogram managed by the World Food Programme (WFP) to rehabilitate cyclone shelters and reduce the risk of disasters in Cox’s Bazar.
Labels: 2020, Cox's Bazar, en, News, Rohingya, USAID, WFP
Labels: 2020, Bangladesh, Burma, en, Regional Crisis, Report, USAID
အမေရိကန် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အေဂျင်စီ (USAID) အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ USAID ရဲ့ ယာယီ အကြီးအကဲ John Barsa က မေလ ၂ ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ကြေညာချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေအပေါ် လူမျိုးစု အလိုက် ရှင်းလင်း ဖယ် ရှားမှု (Ethnic Cleansing )ကို ဖြစ်စေ၊ အီရတ်မြောက်ပိုင်းက YAZIDIS နဲ့ ခရစ်ယာန်တွေအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု (Genocide) ကို ဖြစ်စေ တုံ့ပြန်ရင်ဆိုင်ရာမှာ USAID အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ဘာသာ ရေး လွတ်လပ် ခွင့်ကို ထိပ်တန်း ဦးစားပေးနေရာ မှာ ထားရှိတယ်လို့လည်း ပါရှိပါတယ်။
Labels: 2020, mm, USAID, ဗွီအိုအေ, ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
US continues to pressure Myanmar for Rohingya repatriation
Bonnie Glick speaks to reporters in Cox’s Bazar on Thursday, November 7, 2019 Dhaka Tribune
She was an official visit to check on the condition of the locals affected by the Rohingya refugees
United States Agency for International Development (USAID) Deputy Administrator Bonnie Glick has stressed the importance of pressuring Myanmar forasafe and sustainable repatriation of the Rohingya refugees, who fled their homes due to the military crackdown carried out in the Rakhine state.
Labels: 2019, Bonnie Glick, en, Myanmar, News, Pressure, US, USAID
USAID က မြန်မာနိုင်ငံကို ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းဖိုး စား နပ် ရိက္ခာနဲ့ အကူအညီတွေ ပေးအပ်ခဲ့
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ USAID က မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေကို လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ USAID ရဲ့ နောက်ဆုံး ထုတ် ပြန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအရ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့ အရပ်ဒေသတွေအပါအဝင် နိုင်ငံအနှံ့က ပြည်သူတွေ အတွက် ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, RFA Burmese, USAID, စားနပ်ရိက္ခာ, လှူဒါန်း, သတင်း
$45m more US aid for Rohingyas
Monday, "March 4, 2019"
Rohingya refugees.Reuters file photo
The US is giving $45.5 million more aid for the Rohingyas who fled to Bangladesh after facingabrutal military crackdown in Myanmar's Rakhine in August 2017.
“Today the United States is contributing $45.5 million to the UN World Food Programme in support of the Rohingya refugee crisis,” Earl Robert Miller, US ambassador to Bangladesh, announced yesterday as he called on all nations with the means to contribute to this global humanitarian crisis.
Labels: 2019, Bangladesh, en, Fund, News, Rohingya, US, USAID
Labels: 2019, AA, Bangladesh, en, Fund, Myanmar, News, Rohingya, USAID
Labels: 2019, America, Bangladesh, en, Fund, Myanmar, News, USAID